Kuphume izidumbu ngengxoxo yeWhatsApp | News24
Kuphume izidumbu ngengxoxo yeWhatsApp
ISITHOMBE: sithunyelwe UMnu Zakhele Bhengu (38) kuthiwa udubule isinqandamathe sakhe uNksz Fundiswa Ngcobo (33) ngoba esola ukuthi kunengxoxo kwiWhatsApp nesoka lakhe elidala.
KUSOLAKALA ukuthi ugajwe yisikhwele uMnu Zakhele Bhengu (38) okuthiwa udubule isinqandamathe sakhe maqede wabhekisa inganono wazidula naye. UNksz Fundisiwe Ngcobo (33) ongowaseBulwer kodwa obeqashe eDusale KwaDambuza udutshulwe washonela endlini kaBhengu eseduzane nomgwaqo uSelby Msimang.
Bobabili akubona abalapha eMgungundlovu kodwa bebeze ngokusebenza futhi beqashile. UNgcobo ungowaseBulwer kanti uBhengu yena owase-Underberg, kusho okhulumela amaphoyisa asePlessislear uKaputeni Musa Ntombela.
UBhengu ubesebenza kwenye inkampani yezikhumba ngakhona eDusale. Isehlakalo senzeke ngeSonto ntambama sekudlule kancane ehoreni lesithathu. Ngokusho komthombo ongazange uthande ukudalulwa, kuvele ukuthi izithandani zombili zibe nokuhilizisana emva kokuba kubangwe ingxoxo kwezokuxhumana kuWhatsApp.
Ngokuchaza kwalo mthombo uBhengu udinwe wagana unwanu ngoba esola uNgcobo ukuthi uNgcobo uxoxa nesoka lakhe elidala.
“Emva kwalokho kube nokuhilizisana okusukile kubangwa lengxoxo eqhubekayo. Isoka libhoke ngolaka lisola intombi yalo ukuthi inengxoxo eqhubekayo kuWhatsApp.
“Kuyacaca-ke ukuthi yikho lokho okudale ukuthi athathe isibhamu edubule yona intombi yakhe qede naye wasibeka enhlafunweni wazidubula. Yena kodwa ushonele esibhedlela,” kusho umthombo.
Ikhansela likawadi 23 uDumisani Phungula usigxeke kakhulu lesi senzo. Naye ungomunye wabantu oziyele mathupha endaweni yesehlakalo ngalo iSonto ntambama.
“Kushaqisa kakhulu engifike ngakubona. Lokhu kukhombisa ngokusobala ukuthi abantu kumele bafunde ukukhuluma uma benenkinga ngaphandle kokuthi baze bafike esinqumeni sokuzibulala. Ukukhuluma kuyasiza ngoba uyakwazi ukuthi uthole ukwesekwa ngabangani noma abomndeni. Yimbi kakhulu lento eyenzekile kanti ngiyacela ukuthi abantu bafunde kulokhu ukuthi kubi.
“Zikhona izindlela zokuxazulula izinkinga ngaphandle kokuthi umuntu aze azibulale,” kusho uPhungula.
UKaputeni Ntombela uthe ngaphambi kokuqhuma kwenganono, lo wesifazane kusolakala ukuthi uqale ngokuthumelela ilungu lomndeni wakhe eliseduzane umyalezo. Lo myalezo kuthiwa ubuthi: “come to our rescue [woza uzositakula]”
“Leli lungu lomndeni likhuluma nathi (amaphoyisa) lithe lenze njengoba liyaleliwe leza endlini kodwa lazithela phezu kwezulu lezandla ebeliqhuma endlini. Amaphoyisa asePlessislaer afikile athola owesifazane edutshulwe ebeleni eseshonile. Owesilisa yena uficwe esaphila wathathwa waphuthunyiswa esibhedlela e-Edendale. Ubezidubule ngakwesokudla enhlafunweni,” kuqhuba uNtombela.
UBhengu ushonele esibhedlela ngenxa yokuthi isimo sakhe besibucayi kakhulu.